“Dadka wax takfiiriya (dadka Gaalaysiiya) way lumeen, ciddii kale ku deyatana way sii lumaysaa”, Sheekh Maxamed Dirir – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa kula dardaarmay dadka haysta fikirka takfiirka inay Ilaahay uga toobad keenaan, isla markaana aqoon badan u yeeshaan diinta islaamka inta aanay aqoondaro ugu xukumin dembi weyn ummada islaamka.
Khudbad uu Sheekh Dirir kaga hadlay fikirka Takfiirka iyo waxa Quraanka iyo sunnaha nebigu CSW ka sheegeen ayaa ku bilaabay sidan: “Taariikhda takfiirka ama in qof la gaalaysiiyo, ma dhoweyn, waxay soo bilaabmatay wakhtigii Nebiga CSW. Waana mushkilad dadka qaarkii sheydaanku kaga faa’iidaysto, oo soo noqnoqota. Nebi Maxamed CSW isagoo ummadiisa dhexjooga oo wax ugu qeybinaya si cadaalad ah ayaa waxa u yimi nin la yidhaahdo Dul-khuwaysira, ninkaa ayaa Nebiga CSW ku yidhi ‘Yaa Muxamad, icdil, Cadaalad ma hayside, cadaalad same? Waa erey gaalnimo ah, mar hadii lagu yidhi Nebi Maxamed CSW oo cadaalad samaynaya, ma haysid cadaalad!, ka dib rasuulku CSW aad ayuu uga cadhooday, ka dib markii saxaabadu arkeen cadhada Rasuulka CSW, waxay u holadeen inay dilaan ninkii, laakiin nebiga CSW ayaa ku yidhi iska daaya, niman Khawaarij la yidhaahdo ayaa ka soo bixi doona.
Sheekh Dirir oo ka hadlayey sababaha keeni kara in qof ku dhaco ficilkan Takfiiriga ah ama gaalaysiinta ayaa yidhi, “Sababaha keeni kara waxa ugu horeeya cilmi-yaraan ama jahli. Dadka in la iska gaalaysiiyo oo eregygaa dadka qaarkii adeegsadaan waxa keeni kara aqoondaro iyo cudurka jahliga. Taasoo keenaysa in dadkii aqoonta diimeed lahaa ee bulshadu ka faa’iidaysay ama iyaguba wax ka faa’iidi lahaayeen ay ka soo bilaabaan, dadka wax takfiiriya way lumeen, ciddii kale ku deyatana way sii lumaysaa.
Sheekh Dirir oo ka hadlayey sababaha keeni kara in kooxahaa caalamu-islaamka ka soo noqnoqday ee dadka gaalaysiinaya sababaha ku kalifay wax aka mid ah, Dulmiga lagu hayo dadka diinta islaamka u dhaqdhaqaaqa, oo dadka takfiirka badankoodu waxay ka soo baxeen xabsiyada, oo intii ay xabsiga ku jireen ayey fikradahan qaateen ummada sida inoo gelaysa muslim maaha ee waa gaalo? Taasina ma saamaxayso cadhada ka qabsatay dulmiga lagu sameeyey inuu derejo aanay lahayn dhigo, maxaa yeelay asxaabtii iyo salafkii saalaxa in badan waxay la noolaayeen xukaam aad u dhibi jiray, haddana gaalnimo kumay xukmin ee way la tukan jireen. Sida Ilaahay aayad quraan ugu sheegay, “cadhada aad qof u qabtaan, yaanu cadaalad-la’aan idin gaadhsiin”